‘ओ फरर फरर ... फरर फरर
पखेटा खोली उड्दै जाउँ
ओ सरर सरर ... सरर सरर
बादललाई चुम्दै जाउँ
ओ फरर फरर ... फरर फरर
ओ पंक्षी हे ...
कहीँ छैन तिम्रो सीमाना अरे!’
तामाङ केटो फुर्वा (दयाहाङ) र बाहुन केटी तारा (केकी) ढपक्क सेतै फूलेको काँसको घारी हुँदै भाग्छन्। र, यो गीत गाउँदै खेतका गह्रा–गह्रामा हात फैलाउँदै चराझैं उड्न खोज्छन्।
युट्युबमार्फत् ठिकठिकै ‘हिट’ भएको यो गीत र भिडियो ठूलो पर्दामा चल्दै गर्दा केकी देशको आकाशमा उड्दै थिइन्। यता फिल्मले पाएको सुखद प्रतिक्रियाले
निर्माता/निर्देशकमा खुसी बढाइरहेको बेला केकीमा छटपटी बढ्दो थियो। कारण थियो– राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको आफ्नै फिल्म हेर्न नपाउनु। अष्ट्रेलियाबाट उत्रिएर हतारहतार घर पुगिन् र हतारहतार हल पुगेर साँझको ‘शो’ भ्याइन्।
घामपानीमा केकीको अभिनय मन पराइएको छ। फिल्ममा उनको सिर्जनशीलता अभिनयमा मात्र देखिन्न, उनले पहिलोचोटी फिल्मका लागि गीतको कोरियोग्राफी पनि गरेकी छन्।
त्यसो त नृत्य, मोडलिङ हुँदै फिल्ममा भित्रिएकी केकीले केही म्युजिक भिडियोहरुमा कोरियोग्राफीसमेत गरिसकेकी थिइन्। शिव परियारको गीत ‘क्या दामी भो’ उनको कोरियोग्राफीको चर्चित भिडियो हो।
सीप तिखार्न उनी अभिनयबाहेक काम गर्छिन्। कोरियोग्राफी गर्दा उनलाई नाम चाहिँदैन, सिक्न पाए पुग्छ। त्यसैले कतिपय गीतमा गरेको कोरियोग्राफीको उनले ‘क्रेडिट’ लिएकी छैनन्।
यतिबेला हलमा चलिरहेको फिल्म घामपानीमा कोरियोग्राफी गर्ने मौका भने अचानक जुरेको केकीले जानकारी दिइन्। सिन्धुलीमा फिल्मको सुटिङ चल्दै गर्दा एक कलाकार काठमाडौंबाट सिन्धुली पुग्न ढिला गरेछन्। उनकै कारणले सुटिङ दुई दिन पर सर्ने भयो। सुटिङ नहुँदा खर्च त बढ्ने नै भयो, तोकिएको समयभित्र सक्नुपर्ने सुटिङको ‘सेड्युल’ मा पनि ठूलै हलचल ल्याइदिन्छ।
‘दुई दिनसम्म के गरेर बस्ने त?’
टिममा छलफल भयो, ‘गीतका काम सकौं न त, दुई दिनमा सकिन्छ पनि।’
‘कुन गीत गर्ने त?’
कालिप्रसाद बास्कोटाको संगीत तथा स्वरको गीत ‘पंक्षी’ को भिडियो बनाउने कुरा भयो। तर, त्यतिबेलासम्म यो गीतका लागि कोरियोग्राफरको तय भइसकेको थिएन।
निर्माता रामबाबु गुरुङ र निर्देशक दीपेन्द्र लामाले सल्लाह गरे, केकीलाई लगाउँ न त।
सुरुमा केकी अन्कनाइन्। गुरुङ र लामा दुवैले ढाडस दिँदै भने, ‘तिमीले सक्छौ। पहिले आइडिया बनाउ। कोरियोग्राफीको खेस्रा कोरेर हामीलाई देउ।’
केकीले त्यसै दिन ‘आइडिया’ बुझाइन्। दुवैले मन पराए। फिल्ममा उनको जोडी बनेका अभिनेता दयाहाङलाई पनि मन प¥यो।
तर, दयाहाङ तुरुन्तै हच्किए, ‘म पनि नाच्नुपर्ने?’
‘हिरो भएपछि परेन त?,’ केकीले भनिन्।
‘हुँदैन,’ दयाहाङ पन्छिन खोजे, ‘गीतमा मैले नाचेँ भने त फन्नी देखिन्छ। मान्छे हाँस्छन्।’
‘सबै आर्टिस्टले कहाँ नाच्न जान्दछन् त? कहिलेकाहीँ नजानी गरेको काम पनि राम्रो निस्किन्छ,’ दयाहाङलाई मनाउन केकीलाई समय लागेन।
त्यसो त फिल्ममा कम्मर मर्काएर नाच्नुपर्ने दृश्य भने थिएन। फिल्मकै कथालाई निरन्तरता दिने गीत भएकाले चरित्रअनुसारकै अभिनय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। दया नाचे। उनको नाच रमाइलो पाराको हुने भइहाल्यो। उनको नाचले माहोलमा रमाइलो थप्यो।
गीत छोटो भएकाले आफूले सोचेअनुसारको दृश्य गीतमा देखाउन नसकिएको खड्किन्छ केकीलाई। ‘फिल्मको कथाअनुसार दशैंको बेला भएकाले गीतमा चंगा उडाउँदाका दृश्य खिचिएको थियो,’ केकीले अनुभव साटिन्, ‘तर, गीत निकै छोटो भएकाले ती दृश्य राख्न भने सकिएन।’
यद्यपी केकी सन्तुष्ट नै छिन्। छोटो नै भए पनि फिल्म हेरिरहँदा गीतले छुट्टै मजा दिएको प्रतिक्रिया दर्शकबाट पाएकी छिन्। उनको ‘आइडिया’ बुझेर राम्रो दृश्य खिचिदिएकोमा छायांकार शैलेन्द्र डी. कार्कीलाई पहिलो धन्यवाद दिन्छिन्। त्यसपछि मौका दिने निर्माता र निर्देशकलाई।
केकी यो मौकाले आफूमा ठूलो फाइदा पुगेको बताउँछिन्। यस्ता कोरियोग्राफीले थोरै भए पनि निर्देशन सिकाउँछ। केकीको लक्ष्य निर्देशक बन्नु हो। उनी अभिनयसँगै निर्देशन कला पनि सिकिरहेकी हुन्छिन्।
अभिनय गर्दा आफ्नो मात्र काम गरे पुग्छ, निर्देशक बन्दा फिल्मका सबै पक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैको खुबी चिनेर काम लिनुपर्ने हुन्छ। केकी कोरियोग्राफी गर्दा यस्ता कुरा बुझ्छिन्। अरुसँग काम लिने तरिका सिक्छिन्। तर, उनलाई यतिका वर्ष फिल्मक्षेत्रमा काम गरेकै भरमा निर्देशनमा होमिनु छैन। उनी फिल्ममेकिङ पढेर निर्देशनमा आउन चाहन्छिन्।
आफैं मुख्य भूमिकामा रहेको फिल्ममा कोरियोग्राफरसमेत हुँदाको अनुभव कस्तो रह्यो त?
केकीलाई लाग्छ, एकै समयमा फरक प्रकृतिका दुई काम चुनौतिपूर्ण हुन्छ। उनको अनुभवले यो पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ एउटा काम गर्दै गर्दा आउने ‘आइडिया’ ले अर्को कामलाई पनि सहयोग पु¥याउँछ।
‘एकैचोटी दुईतिर सोच्दा गाह्रो काम त हो,’ केकी भन्छिन्, ‘तर आफैंले अभिनय गरिरहेको फिल्मको कोरियोग्राफी गर्दा सजिलो पनि छ। आफ्नो चरित्र कस्तो हो र त्यसले के–के गर्छ भन्ने थाहा हुने भएकाले सोचेअनुसारको काम निकाल्न सजिलो हुन्छ। अरुको निर्देशनमा काम गर्दा निर्देशकले भनेअनुसार शतप्रतिशत बुझिन्छ भन्ने छैन। पंक्षी गीतमा सजिलो यसकारण पनि भयो, दया दाइ कुरा भनेको कुरा छिट्टो बुझ्नुहुन्थ्यो र हाम्रो मन पनि मिल्छ। यसो हुँदा काम गर्न झनै सजिलो हुन्छ।’
फिल्म हेर्दा दर्शकले केकीको कोरियोग्राफी भन्ने त कमैले ख्याल गरे होलान्! फिल्म र अभिनयबाट पाएको प्रतिक्रियाले भने केकीलाई हौस्याएको छ।
‘मैले यत्तिको राम्रो प्रतिक्रिया आउला भन्ने सोचेकै थिइनँ,’ केकीले भनिन्, ‘यो फिल्म पनि मेरा अरु फिल्मजस्तै औषत होला भन्ने सोचेको थिएँ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ५, २०७४ १४:४८:५६